Monday April 15, 2019 - 14:37:12 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Waxaa la xiray inta badan dadkii ugu fir fircoonaa dhalinyarada Bajaajta ku xamaalata ee Muqdisho. Ciidan aad u hubeysan oo wajiga soo xirtay ayaa tagay dhowr xaafadood oo ku yaala Muqdisho waxaana ay la baxeen dhalinyaro.
Waxey u muuqdeen kuwa heysta liis dheer ayuu yiri qof ka mid ah dadka degmada Hodan. Ilaa 20 ka mid ah horjoogayaasha Bajaajta ayaa xabsiga la dhigay xalay kadib markii ay Sabtidii dhigeen dibbadbax looga soo horjeedo dilka lagu hayo dhallinyaradaas.
Howlgalka waxaa hogaaminayay Saadaq Joon oo ku magacaaban taliyaha booliska gobalka Banaadir. Shaqsiyaadka xalay la afduubtay ayaa ahaa dadkii hogaaminayay banaanbaxa kaas oo lagu dalbaday in Farmaajo is casilo.
Arrintaan ayaa abuuri karta xasarad cusub. Xariga dhalinyaradan ayaa imaanaya 24 saac kadib markii Farmaajo uu jeediyay hadal uu ku sheegay in aan banaanbax dambe la aqbali doonin iyo in Bajaajleyda ay kusoo dhex dhuuntaan Al Shabaab.
Saadaq Joon oo toos uga amar qaatay Fahad, Kheyre iyo Farmaajo waa nin aan waligii ciidan Dowladeed soo noqon, wuxuun ka tirsanaan jiray maleeshiyadii Sigane iyo Furux, ka hor intii uusan u tahriibin Yurub.
Dhallinyaradan dareenkooda muujiyay balse jawaabta looga dhigay in xalay guryahoodii lagala baxay ayaa abuuri karta xaalad cusub.